Dabaasha Rosengård | Somaliska
Hoolka lagu dabaasha ee xaafada Rosengård ee magaalada Malmö ayaa sameynaya waqti u gaara haweenka. Rosengårdsbadet ayaa guud ahaan maalinta sabtida iyo habeenada talaada iyo khamiista waxaa mamnuuc ka ahaan doona raga. Waxaa daaqadaha lagu xiriyaa daahyo ayadoo guud ahaan ay ka shaqeyn doonaan shaqaale dumar ah waqtiga loo qabtay haweenka. Arintaa ayaa loo sameeyay si loo soo jiito haweenka Muslimiinta ah ee diintooda darteed aan isticmaalin goobaha ay iskula dabaashaan raga iyo dumarka. "Dhowr boqol oo haween ah ayaa mar hore is diiwaan galiyay, waa arin farxad leh waayo dumarka ku nool Rosengård ma dabaashaan" ayay tiri Biance Gustavsson oo masuul ka ah qeybta dumarka. Waxaa sidoo kale hoolka dabaasha loo sameeyay 3 meelood oo qaas ah oo dadka aan dooneyn in ay dadka kale la qabaystaan ay si gaar ah u isticmaali karaan. Sydsvenskan
Hoolka lagu dabaasha ee xaafada Rosengård ee magaalada Malmö ayaa sameynaya waqti u gaara haweenka. Rosengårdsbadet ayaa guud ahaan maalinta sabtida iyo habeenada talaada iyo khamiista waxaa mamnuuc ka ahaan doona raga.
Waxaa daaqadaha lagu xiriyaa daahyo ayadoo guud ahaan ay ka shaqeyn doonaan shaqaale dumar ah waqtiga loo qabtay haweenka.
Arintaa ayaa loo sameeyay si loo soo jiito haweenka Muslimiinta ah ee diintooda darteed aan isticmaalin goobaha ay iskula dabaashaan raga iyo dumarka.
“Dhowr boqol oo haween ah ayaa mar hore is diiwaan galiyay, waa arin farxad leh waayo dumarka ku nool Rosengård ma dabaashaan” ayay tiri Biance Gustavsson oo masuul ka ah qeybta dumarka.
Waxaa sidoo kale hoolka dabaasha loo sameeyay 3 meelood oo qaas ah oo dadka aan dooneyn in ay dadka kale la qabaystaan ay si gaar ah u isticmaali karaan.